कसले जित्छ कमेडी च्याम्पियन ? मनोज गजुरेलले गरे यस्तो विष्लेषण « Etajakhabar
कसले जित्छ कमेडी च्याम्पियन ? मनोज गजुरेलले गरे यस्तो विष्लेषण
काठमाडौ । रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन २’ अहिले चर्चित कार्यक्रम बनेको छ । पहिलो पटक नेपालमा सुरु गरिएको यस्तो प्रयोगले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएको छ । हाँस्य विधा मार्फत भविष्य खोज्नेहरुका लागि पनि निकै राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ । अहिले यो शो मा विजेता घोषणाको चरणमा पुगेको छ । अहिले प्रस्तुतीहरु सकिएका छन् । आगामी २ असोजमा विजेता घोषणा हुने प्रतियोगिताको फाइनल मात्र हुनेछ ।